Al-Shabaab oo soo bandhigtay Muuqaal iyo Sawiro muujinayo Xasuuq loo geystay Ciidamada Kenya ee Kulbiyow - Hablaha Media Network
Al-Shabaab oo soo bandhigtay Muuqaal iyo Sawiro muujinayo Xasuuq loo geystay Ciidamada Kenya ee Kulbiyow
HMN:- Ururka Al-Shabaab ayaa si rasmi ah usoo bandhigay muuqaalka iyo sawirada dagaalkii ay ku qaadeyn Saldhiggii ay Ciidamada Kenya ku lahaayeen Kulbiyow.
Qeybta Warfaafinta Al-Shabaab ee loo yaqaan (Al-Kataa’ib) ayaa biihisay muuqaal iyo sawiro muujinayo xasuuq loo geystay Ciidamadii Kenya ee halkaas ku sugnaa kadib markii ay la kulmeyn weerar aad u culus.
Weerarkaas kadib Kenya ayaa sheegatay inay Al-Shabaab ka dishay ilaa 30 dagaalyahan, balse muuqaalkaan iyo sawiradaan ayaa muujinayo sheeko kale oo ku saabsan dagaalkii lagu qaaday Saldhigga Kulbiyow.
Muuqaalkaan ayaa waxaa lagu soo saaray luuqadda Ingiriiska iyo Sawaaxiliga, sidoo kalana waxaa ka dhex muuqdo meydka ciidamada Kenya iyo garaawi dagaal oo lagala wareegay.
Ereyadii Shiikh Al-Shabaab ee muuqaalka ka dhex hadlayo ayaa waxaa kamid ah ahaa (Waxaan dagaal ku qaadnay Saldhigga Codowga ee Kulbiyow, waxaan dilnay Gaalo badan, waxaan qaniimeysanay agab military oo aan cadawga ka xoognay kana carar”.
Halkaan hoose ka daawo muuqaalka iyo sawirada ay Al-shaab soo bandhigta